Maxkamad ku taalla Britain oo xabsi daa’in ku xukuntay wiil Soomaaliyeed oo dilay xaaskiisii – Radio Muqdisho
Maxkamad ku taalla Britain oo xabsi daa’in ku xukuntay wiil Soomaaliyeed oo dilay xaaskiisii
Maxkamad ku taalla magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa xabsi daa’in ku xukuntay wiil Soomaali ah oo lagu helay danbi ah in uu dilay xaaskiisa oo uur leheyd sannadkii hore.
Cabdirashiid Khadar oo 22 jir ahayaa Maxkamadeyntiisu socotay muddo toddobaad ah iyadoo xeer beegtidu ku heshay dambi ah in uu dilay xaaskiisi, Amal Cabdi oo 21 jir aheyd, iyadoo uur leh bishii July ee 2015.
Maxkamadda ayaa lagu soo bandhigay caddeymo muujinaya in Cabdirashiid uu saddex toorrey oo kala duwan ku dhuftay xaaskiisa kaddib markii ay ka dalbatay furriin.
Wiilkan ayaa beeniyey in uu xaaskiisa dilay,markii meydkeeda laga helay guriga ay deganaayeen sanadkii hore.
Maxkamadda ayaa caddeeysay in Cabdirashiid uu tagay Britain bishii March ee 2015 si uu xaaskiisa ula noolaado, waxayna markii hore lammaanahan ay isku guursadeen waddanka Ethiopia.
Garsoore Neil Garnham oo xukunka ku dhawaaqay ayaa u sheegay eedeysanaha in uu ku kacay fal wuxuushnimo ah oo si gardarro ah uu ugu dilay gabar dhallinyaro ah oo xaaskiisa aheyd, ”waxa ad tooriyeysay kaliya ma ahan hal mar, balse waa toban jeer” ayuu yiri Garsooraha maxkamadda,
C/rashiid Khadar ayaa lagu xukumay xabsi daa’in, ugu yaraan uu la socda 20 sano oo uu xabsiga ku jirayo.
Daawo Sawirrada: Madaxweynaha oo ka qeybgalay xuska munaasabadda 26-ka Jun
Akhriso magacyada odayaasha dhaqanka ee soo xuli doona Baarlamanka Soomaaliya